သစ်ကုလားအုတ်လေးရဲ့ နေ့စဥ်ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲများကို ဟာသမြောက်အောင် ရေးဆွဲထားတဲ့ရုပ်ပုံများ - Online Info
သစ်ကုလားအုတ်လေးရဲ့ နေ့စဥ်ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲများကို ဟာသမြောက်အောင် ရေးဆွဲထားတဲ့ရုပ်ပုံများ
May 22, 2022 Bee News Art, Funny Photo 0
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ …. ယခင်တုန်းကလည်း အားလုံး သဘောကျ ရယ်မောခဲ့ကြတဲ့တိရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ ဟာသမြောက်လှတဲ့ သရုပ်ဖော်ပုံလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးဖူးခဲ့ပါတယ် ။ ပရိသတ်အားလုံးလည်း သဘောကျ နှစ်ခြိုက်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေ့မှာဆိုရင် အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲက ပင်ပန်းမှုတွေကို မေ့လျော့သွားစေမယ့် သစ်ကုလားအုတ်လေးရဲ့ ဟာသသရုပ်ဖော်ကာတွန်းပုံလေးတွေကို ထပ်ပြီး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပန်းချီဆရာဟာ သစ်ကုလားအုတ်လေးတွေ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရမယ့် အခက်အခဲများကို စိတ်ကူးယဉ် ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ဟာသမြောက်အောင် ဖန်တီးသရုပ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ လည်ပင်းရှည်ကြီး ရှိနေတာဟာလည်း သိပ်ပြီး အဆင်ပြေတဲ့ပုံ မပေါက်နေပါဘူးနော် ….
ကဲ …. ဒါကြောင့် သစ်ကုလားအုတ်လေးတွေကို ချီးကျူးတယ့်အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဟာသရုပ်ပုံလေးတွေကို အောက်မှာ ဆက်လက် ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော် သဘောကျပြီး ရယ်မော ရတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်သူငယ်ချင်းတွေပါ အတူတူ ရယ်မောနိုင်အောင် like နဲ့ share လေးလုပ်ပြီး မျှဝေပေးသွားပါဦး ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ ….
ခြင်္သေ့ကို ခုခံတိုက်ခိုက်ပြီး သခင်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ခွေးလေးအီဗာ
ဒေါ်လာ(၃၇၄)တန်ဖိုးရှိတဲ့ မုန့်တွေကိုခိုးယူခဲ့လို့ ရဲနှင့်မုန့်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က အလိုရှိနေတဲ့ ပင်လယ်ဇင်ယော်လေး
ကျွန်တော်တို့သတိမထားမိတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးတဲ့အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း (၂၅)ခု
မျှဝေသင့်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ် အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံး ဒီဇိုင်းပုံ (၂၀)
စာခိုးချမယ့်စာရွက်တွေကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာ ဖွက်ထားတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ ပုံများ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သေချာပေါက် ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေကို သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲထားတဲ့ ကာတွန်း ၁၅ပုံ